အေရွ႕ေတာင္အာရွ မိတ္ကပ္ အမွတ္တံဆိပ္ Y.O.U သည္ Round C ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ရရွိ - Pandaily
အေရွ႕ေတာင္အာရွ မိတ္ကပ္ အမွတ္တံဆိပ္ Y.O.U သည္ Round C ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ရရွိ
Feb 16, 2022, 13:00ညနေ 2022/02/16 14:05:03 Pandaily
အရှေ့တောင်အာရှ အခြေစိုက် မိတ်ကပ် အမှတ်တံဆိပ် Y.O.UHidden Mountain Capital, SIG, Gaorong Capital, ATM Capital, eWTP Arab Capital, M31 Capital စသည်ဖြင့် ဦး ဆောင်သော အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၀ ကို C ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ Y.O.U သည် ဒေါ်လာသန်း ၇၀ ရန်ပုံငွေ ရရှိခဲ့သည်။
အသစ်သော ရန်ပုံ ငွေများကို အဓိကအားဖြင့် Y.O.U ၏ စတိုးဆိုင် များ တိုးချဲ့ ခြင်း၊ ထုတ်ကုန် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ရှိ ထွန်း သ စ်စ စျေးကွက် များ၌ စွမ်းရည် တိုးချဲ့ ခြင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ မိတ်ကပ် လုပ်ငန်းတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၏ အနေအထားကို ပိုမိုခိုင်မာ စေ ရန်အသုံးပြုသည်။
မိတ္ကပ္ နဲ႔ အသား အေရ ထိန္းသိမ္းေရး ပစၥည္းေတြကို ေပါင္းစပ္ ထားတဲ့ အလွ ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု အေနနဲ႔ Y.O.U ဟာ အင္ဒိုနီးရွား ေစ်းကြက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္း ပိုင္းမွာ စတင္ လည္ပတ္ ခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ ကစလို႔ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ အထိ တိုးခ်ဲ႕ ေရာင္းခ် ခဲ့ကာ အေရာင္း ျပခန္း ေပါင္း ေလး ေသာင္း နီးပါး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ခေတ်သစ် အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် အရေပြား ပြ problems နာများကို အတွင်း ပိုင်းမှ ဖြေရှင်း နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ဘေးကင်း လုံခြုံရေး ပစ္စည်း များကိုအသုံးပြုသည်။ အင်ဒိုနီးရှား အရေပြား ၏ ထူးခြား ချက်များကို တုန့်ပြန် သော အနေဖြင့် Y.O.U သည် အသားအရေ ထိန်းသိမ်း မှုဆိုင်ရာ မိတ်ကပ် နှင့် အိုမင်း ခြင်း ကိုကာကွယ် သည့် အနှစ်သာရ ကဲ့သို့သော ဒေသတွင်း ထုတ်ကုန် များစွာ ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
တရုတ် စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ် OPPO မှ Y.O.U တည်ထောင်သူ အဖွဲ့သည် အရှေ့တောင်အာရှ တွင် လက်လီ ရောင်းချ ခြင်းနှင့် မိတ်ကပ် ထုတ်ကုန်များ တီထွင် ခြင်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံ များစွာရှိသည်။ တည်ထောင်သူ အဖွဲ့က “ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုဟာ သူ့ရဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အဆင့်အတန်း နဲ့ သက်ဆိုင် တယ်။ တစ် ဦး ချင်း ဂျီဒီပီ မြင့်မားသော တရုတ်နှင့် ယူနိုက်တက်စတိတ် ကဲ့သို့သော နိုင်ငံ များရှိ စားသုံးသူ များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အရှေ့တောင်အာရှ သုံးစွဲ သူများသည် အရည်အသွေး မြင့်မားသော အမှတ်တံဆိပ် များ ကိုရှာဖွေ နေကြသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ စျေးကွက် ၊ အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင် ၀ င်ရောက် ရန် အတားအဆီး များ မြင့်မား ခြင်းကြောင့် ပြည်ပ ထုတ်ကုန်များ လျင်မြန်စွာ ၀ င်ရောက် ရန် မဖြစ်နိုင် သဖြင့် ခိုင်မာသည့် ရုပ်သံလိုင်း တိုးချဲ့ နိုင်စွမ်း ရှိသော ပြည်တွင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ မြင့်တက် လာခြင်း အတွက်အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်း ဖြစ်သည်။ “
အရောင်း လမ်းကြောင်း မြှင့်တင် မှုအရ Y.O.U သည် franchise စတိုးဆိုင် များ၊ စူပါမား ကက် များ၊ အဆင်ပြေသော စတိုးဆိုင် များ နှင့်အဓိက e-commerce ပလက်ဖောင်း များအပါအ ၀ င် အွန်လိုင်း နှင့် အော့ ဖ် လိုင်း ချန်နယ် အပြင် အဆင် ကိုသုံး နှစ်အတွင်း ပြီးစီးခဲ့သည်။ Y.O.U သည် အရောင်းဆိုင် များ ၏ပုံရိပ် ကိုမြှင့်တင် ရန်နှင့် စျေးဝယ် လမ်းညွှန် များကို လေ့ကျင့် ရန်အတွက် ဖြန့်ဖြူး သူ အမြောက်အများ မှ အသိအမှတ်ပြု ခံရသည်။
ကုန်ပစ္စည်း သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုအရ Y.O.U သည် တရုတ်၏ ရင့်ကျက်သော မိတ်ကပ် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် ကို မှီခို ပြီး အရည်အသွေး၊ ထုတ်ကုန် အဆင့်မြှင့်တင် မှုနှုန်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် တို့တွင် အားသာချက်များရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ထိပ်တန်း တိုက်ရိုက် အရောင်း စာရေး Li Jiaqi သည် ၁၁. ၁၁ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၇ ဘီလီယံ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး Weia သည် နောက်မှ လိုက် သည်
ကမ္ဘာကျော် စျေးကွက် သုတေသန ကုမ္ပဏီ Inmint က နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာတွင် အရှေ့တောင်အာရှ သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိတ်ကပ် လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် “အနာဂတ် စျေးကွက်” အဖြစ် စာရင်းဝင် ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၅ ခုနှစ် တွင်၎င်း၏ စျေးကွက် အရွယ်အစား သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀၀ ထက်ကျော်လွန် မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တို့သည် ၁၂၀% ကျော် တိုးတက်မှု အလားအလာရှိသည်။